Mpempe akwụkwọ aluminom
Square aluminum tube/ọjà
Ihe kpatara mmụba na ọnụahịa aluminom zuru ụwa ọnụ
A na -eji aluminom mee ihe niile site na ụgbọ ala na gwongworo ruo ekwentị na ihe ọ beụ beụ mmanya. Ọnụahịa ahụ metụrụ US $ 3,000 kwa tọn, ọkwa kachasị elu kemgbe nsogbu akụ na ụba ụwa na 2008, wee daa ntakịrị mgbe ụbọchị ole na ole gasịrị. Mana ọ ka fọrọ nke nta ka ọ bụrụ 70% dị ọnụ karịa oge a n'afọ gara aga. Kedu ihe kpatara ọnụ ahịa ...
Aluminium alloy trolley case
Aluminum alloy akpa N'ozuzu, ọ na -agụnye shei, bracket, panel na akụkụ ndị ọzọ metụtara ya, nke na -arụkarị ọrụ n'ichekwa ihe dị n'ime. A na -eji ya eme ihe n'ọtụtụ ebe eji achọ mma, ngwakọta ngwa, ọla, ogbo, ngwa, mita, elektrọnik, nkwukọrịta, akpaaka, ihe mmetụta ...
Kedu ihe kpatara ọnụ ahịa aluminom ji esi ike?
Aluminom, nke amabeghị na ọla ndị na-abụghị ọla, aghọọla achịcha dị ụtọ. N'ịbụ ndị a na -ebubata, ọnụ ahịa ọdịnihu gara n'ihu na -arị elu kemgbe izu gara aga, yana mmụba nke 6.66%. Na Mọnde a, Shanghai Aluminom (22245, -1135.00, -4.85%) gara n'ihu na -arị elu nke ukwuu, risi ...
Aluminom-magnesium-manganese efere na-akwado
Ihe nkwado T dị elu maka aluminom-magnesium-manganese metal roof Aluminum-magnesium-manganese metal roof buckle (aluminom-magnesium-manganese plate flat roof fix support) Nkwado a kwadoro maka aluminom-magnesium-manganese metal metal bụkwa nke a na-akpọ aluminom-alloy. nkwado. Emere ya na ...
Ngwongwo niile nke aluminom! Nhọrọ nke mbụ maka ụlọ ndị dị n'ihu
Nke mbụ, ka m kwuo maka kichin! Kichin bụ ebe dị mmiri mmiri na nke ruru unyi, yabụ na kabinet dị na kichin kacha enye nsogbu. Ha na -adị mfe ibute mildew. Ha agaghị ama mma mgbe otu afọ ma ọ bụ abụọ gasịrị ma ọ bụrụ na emezigharị ha ọhụrụ. Ugbu a, enwere alloy aluminom niile kama ịbụ onye òtù ọlụlụ ...
Aluminom: A na -ewebata iwu ugboro ugboro, ọnụ ahịa aluminom na -agbanwe karịa
Nlekọta izu ahụ N'izu gara aga, National Development and Reform Commission nyere “Barometer nke Mmezu nke Ebumnuche Njikwa Ike Abụọ na mpaghara dị iche iche na ọkara mbụ nke 2021 ″. Ike ike nke ógbè 9 (mpaghara) na Qinghai, Ningxia, Guan ...
Akụkọ na -aga n'ihu na -egbochi, ọnụ ahịa aluminom dịkwa n'akụkụ siri ike
Erite uru: 1. Akụkọ ọhụrụ a ka na -egbochi ya. Osisi aluminom Tomago nke Australia nwere ike ihu ihe egwu nke mbelata mmepụta n'ihi ikewapụ ndị ọrụ. Osisi aluminom dị na New South Wales ma bụrụkwa ihe na -agbaze aluminium kachasị ukwuu na Australia na -emepụta kwa afọ ...
Mkpuchi ọkụ eletrik na mmachi mmepụta, ọnụ ahịa aluminom bilitere karịa 30% n'afọ a
Kemgbe mbido afọ a, isiokwu nke ngalaba igwe anaghị agba nchara nọ na-agbagharị. Mmụba kacha pụta ìhè bụ aluminom, na ọnụ ahịa ọdịnihu aluminom ruru 20,445 yuan/ton, ndekọ dị elu n'ime afọ iri gara aga. Feng Fan, onye nyocha aluminom na Yide Futures, kwenyere na ...
Ekekọrịta: ALUMINUM | AKỤKỌ IZU: ỤLỌ Eletrik na ọgba aghara agaghị agbanwere usoro ahụ ike ahụike.
Nri nke aluminom nke China kwụsiri ike, yana oke mkpa nke esenidụt na -alaghachi.
Aluminom | Nkwupụta kwa izu: Mbelata ọkụ eletrik na ọgba aghara ọrịa agaghị agbanwe usoro ahụike
Ọnọdụ ụlọ ọrụ ọnụ ahịa aluminom gbalitere n'izu a, ụlọ ahịa ụlọ na -aga n'ihu na -ada. Ọnụ ego aluminom mechiri na 19,920 yuan/ton n'izu a, 0.45% n'izu n'izu. Dabere na atụmatụ anyị, nkezi uru nke ụlọ ọrụ aluminom electrolytic bụ 4172 yuan/ton, -0.25% na ...
Ọnụ ego mbupụ nke nnukwu ụlọ ọrụ abụọ nke nchara na aluminom nwere ike ịbawanye nke ọma, China na -emegide usoro mmezi ókè ala carbon nke EU.
“Usoro mmezi nke ókèala carbon bụ nha nke otu. Ọ na -agbasawanye okwu ihu igwe na mpaghara azụmaahịa. Ọ na -emebi iwu WTO, na -emetụta sistemụ azụmaahịa nwere ọtụtụ na -akwụghị ụgwọ ma na -emeghe, ma na -emebi nnukwu ntụkwasị obi nke mba ụwa ...
Igwe igwe Titan (TITN) akarịala ụlọ ahịa azụmaahịa na azụmaahịa ndị ọzọ n'afọ a?
Ndị ọchụnta ego nwere mmasị na azụmaahịa na nnukwu ngwaahịa kwesịrị ịchọ mgbe niile maka ụlọ ọrụ kacha arụ ọrụ n'ime otu ahụ. Ndi Titan Machinery (TITN) bụ otu n'ime ebuka nke afọ a? Ka anyị lebakwuo anya na arụmọrụ nke ngwaahịa kwa afọ iji chọpụta. Igwe Titan bụ otu n'ime 211 ...
Oge ezumike adịghị mkpụmkpụ. Kedu ihe kpatara ọnụ ahịa aluminom ji na -agbasi ike na July?
N'ọnwa Julaị, ọnụ ahịa ntụpọ ntụpọ nke almọnd aluminom na-egosipụtakarị ihe na-aga n'ihu, na arụ ọrụ ya bụ yuan/tọn 18,700-19,900. Dị ka data si kwuo, nkezi ọnụ ahịa nke ngwaahịa aluminom ụlọ dị n'ahịa East China na July 30 na Fraịde gara aga bụ yuan/tọn 19,856.67, ma e jiri ya tụnyere marke ...
RM I bụ tebụl na -agbagwoju anya nke ejiri tubụ aluminom square
Ngwongwo kachasị ọhụrụ na nchịkọta United Objects ya nke onye nrụpụta Zurich Joseph Smolenicky bụ tebụl RM I. Tebụl a na -agbagwoju anya bụ nke tubes aluminom nwere akụkụ ya, nhazi ya na -ekpughekwa otu esi eji ihe dị mfe arụpụta ihe dị mgbagwoju anya. Mma nke RM m dị na t ...
Gọvanọ Lee na Kọmịshọna Rolf mara ọkwa na Caesars Aluminom ga -akwaga isi ụlọ ọrụ ya na Williamson County
Nashville, Tennessee - Gọvanọ Tennessee Bill Lee, Kọmịshọna mmepe akụ na ụba na obodo Bob Rolf, na ndị ọrụ Caesars Aluminom kwupụtara taa na ụlọ ọrụ ahụ ga -akwaga isi ụlọ ọrụ ya site na Foothill Ranch, California gaa Franklin, Tennessee. Caesars Aluminium bụ nde US $ 1.8 ...
Azụmahịa ígwè Australia kwụsịrị! China ebidola nnukwu mmegharị iji kwado ụlọ ọrụ nchara
China sara mbara ma baa ọgaranya na mmanụ. Agbanyeghị, ebe ọ bụ na China bụ mba mepere emepe ma na -ere nnukwu akụ, ọ dị mkpa ibubata ụfọdụ ihe ndị dị n'ime ya. Banyere ígwè na akụ akụ na -ejikarị na ụlọ ọrụ China, n'agbanyeghị ngụkọta r ...
Ngwongwo ụlọ niile nke aluminom nwere ike na-eduga ụlọ ọrụ nkwalite ụlọ
N'okpuru ndabere nke obere carbon na nchedo gburugburu ebe obibi, ụlọ ọrụ na-enye ụlọ niile nke aluminom na-aga n'ihu na-ekpo ọkụ. Agbanyeghị na ọ bụ ụlọ ọrụ na -apụta, na -arụ ọrụ nke ọma, ọ nwere nnukwu ikike ịbụ isi ihe eji achọ mma. ...
Ọla ndị na-abụghị ọla
Igwe anaghị agbaze: [Metallurgy] metal na-abụghị ferrous, n'echiche dị warara, a na-akpọkwa ọla na-abụghị ferrous, nke bụ okwu n'ozuzu maka ọla niile ewezuga iron, manganese, na chromium. Ngwongwo ndị na-abụghị ferrous na echiche sara mbara gụnyere alloys na-abụghị ferrous. Alloy na-abụghị ferrous bụ alloy ...
Ozugbo Russia tinyere ụtụ isi, Rusal nwere ike machibido mbupụ aluminom
Rusal International PJSC, onye kacha emepụta aluminom na mpụga China, nwere ike machibido mbupụ nke igwe mgbe tarifụ etinyere na mbupu ga -amalite n'ọnwa na -abịa. Companylọ ọrụ ahụ na -ebupụ ihe dị ka tọn nde tọn atọ nke aluminom kwa afọ, na afọ a nwere ike belata ọrịre nke aluminom site na narị ...
Dabere na "Ntuziaka na -akwado ike nke mgbochi na njikwa nke gburugburu ebe obibi Isi mmalite nke" Ihe owuwu abụọ "nke Ministry of Ecology na Nchedo Gburugburu Ebe obibi nyere ụbọchị ole na ole gara aga, ụlọ ọrụ nhazi aluminom adịghị ogologo ...
A na-akwado usoro ọkọnọ na ihe achọrọ nke ọma, ịdị ala ọnụahịa aluminom dị mkpụmkpụ dịkwa ike
A na -emepụta nnukwu carbon dioxide n'oge mmepụta aluminom electrolytic. Nke a adabaghị na mmụọ nke "nnọpụiche carbon" na "peaking carbon" nke ndị isi China tụpụtara n'afọ gara aga. N'ọdịnihu mgbe a na -abawanye uru nchekwa gburugburu, ọganihu nke e ...
Kekọrịta | Ihe asatọ na -emetụta ike ọgwụgwụ nke ihe igwe
Ike ọgwụgwụ nke ihe ahụ na -enwe mmetụta dị oke egwu maka ihe dị iche iche dị na mpụga na nke ime. Ihe ndị dị na mpụga gụnyere ọdịdị na nha nke akụkụ ahụ, imecha elu ya na ọnọdụ iji ya, wdg Ihe ndị dị n'ime gụnyere ihe mejupụtara ihe ahụ n'onwe ya, steeti t ...
Kekọrịta | Oke igwe n'ichepụta ụgbọ elu
1 Nhazi agụba agụba ahụ bụ akụkụ elu nwere onwe n'ụdị. Mgbe ị na-ahazi ụdị akụkụ a, enwere njirimara: dị gịrịgịrị, dị mfe nrụrụ n'oge nhazi, ihe a na-abụkarị igwe anaghị agba nchara, Monel alloy, INCONEL, titanium na nickel dabere na igwe siri ike igwe.
IAI: A na -atụ anya ka ịrị elu aluminom ga -abawanye n'ihe dị ka 80% site na 2050. Aluminom nke abụọ nwere ike mezuo ọkara ihe a chọrọ.
Dabere na data nke International Aluminium Institute (IAI) na London wepụtara, ego nke mkpofu aluminom ochie ruru nde tọn 20 na 2019, ihe ruru 60% nke mkpokọta mkpokọta aluminom n'afọ ahụ, nke pụtara na nde 300 tọn griin haus gas umu anwuru wi ...
EU na -atụpụta ịtụnye ụtụ carbon dioxide na aluminom na nri
Dị ka atụmatụ ahụ siri dị, Kọmitii European ga -atụpụta usoro mmezi ókèala carbon maka ọkụ eletrik na -ebubata na European Union. A ga -ejikọta tarifụ ọhụrụ ahụ na ọnụ ahịa ndị na -emepụta EU echeburu ma ga -emetụta ngwaahịa ndị a: Portland ciment, elu al ...
Ngwa nke aluminom na ụgbọ ala mwepụta
Aluminom abụrụla ihe dị mkpa dị mkpa na ụgbọ ala ebuputara, n'ihi na alloy aluminom nwere njupụta dị ala yana arụmọrụ okpomọkụ dị ala na -enweghị atụ. Hydrogen mmiri na tank mmanụ ikuku oxygen nke rọketi a na -ebupute ya bụ nke aluminom. Isi ihe owuwu nke cabi ...
Adress: Mba 66-6, okporo ụzọ Shanshui, Eastern Industrial New Town, Ancheng Town, Pingyin County, Jinan, Shandong, China.
Faksị: +86 15169199679
Xia Zhang kwuru